အိပ်ပုပ်ကြီးတဲ့သူတွေဟာ ဘာကြောင့် ပိုပြီးအောင်မြင်ကြတာလဲ..? - APANNPYAY
/ အိပ်ပုပ်ကြီးတဲ့သူတွေဟာ ဘာကြောင့် ပိုပြီးအောင်မြင်ကြတာလဲ..?
အိပ်ပုပ်ကြီးတဲ့သူတွေဟာ ဘာကြောင့် ပိုပြီးအောင်မြင်ကြတာလဲ..?
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အိပ်စက်ခြင်းဟာ အစားအသောက်ထက်ပိုပြီး အရေးပါပါတယ်။ အစာမစားဘဲ ၂ပတ်အထိနေနိုင်ပေမဲ့ ၁ဝရက်လောက် မအိပ်ဘဲနေရင်တော့ စိတ်ကယောင်ချောက်ခြားဖြစ်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်သင့်ပါတယ်။
အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး၊ အလှအပဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေသာမက ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်အောင်လည်း ကောင်းစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းက ပေးစွမ်းတဲ့ ဘဝအောင်မြင်မှု ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်တွေ မြင့်တက်လာမယ်။
အိပ်စက်နေစဉ်မှာ ဦးနှောက်က တစ်နေ့တာလုံးရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေကို စိစစ်ပြီး သိမ်းဆည်းပေးရပါတယ်။ အိပ်ရေးဝဝမအိပ်စက်တဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ကနေ မှတ်ဉာဏ်တွေကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းမပေးနိုင်တာကြောင့် သတိမေ့တတ်တာတွေ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၂။ ပိုမို အာရုံစူးစိုက်နိုင်လာမယ်။
ညဘက်မှာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခြင်းက အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ပိုမိုထက်မြက်လာစေပြီး သင်ယူလေ့လာမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
၃။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမိုကျစ်လစ်သွယ်လျစေတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုက အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ခြင်းပါပဲ။ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်တဲ့အခါ အစာစားချင်စိတ်ကို လည်ပတ်စေတဲ့ leptin ဟော်မုန်းကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး အစာများများမစားချင်အောင် တားဆီးပေးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကို မြင့်တက်စေတယ်။
အိပ်စက်နေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကနေ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ antibodies နဲ့ cytokines တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါတွေမဖြစ်အောင်၊ မဖျားနာအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချမှတ်နိုင်စေတယ်။
အိပ်စက်နေချိန်မှာ အာရုံကြောလေးတွေကို ခေတ္တအနားပေးထားတယ်၊ ပျက်စီးနေတဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး အာရုံကြောသတင်းပို့ချမှုတွေ သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်ကို ရှင်းလင်းပေးထားသလို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့အချိန်တွေမှာ ဦးနှောက်ကို ရှင်းလင်းစေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာမှာ တွေဝေမနေတော့ဘဲ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်စေနိုင်ပါတယ်။
၆။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေတယ်။
အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်းဟာ စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကို တက်ကြွလန်းဆန်းစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စိုးရိမ်စိတ်တွေကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်ကျရောဂါမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Nyein Nyein - FB
အိပျပုပျကွီးတဲ့သူတှဟော ဘာကွောငျ့ ပိုပွီးအောငျမွငျကွတာလဲ..?
လူတဈယောကျရဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျ အိပျစကျခွငျးဟာ အစားအသောကျထကျပိုပွီး အရေးပါပါတယျ။ အစာမစားဘဲ ၂ပတျအထိနနေိုငျပမေဲ့ ၁ဝရကျလောကျ မအိပျဘဲနရေငျတော့ စိတျကယောငျခြောကျခွားဖွဈပွီး အသကျအန်တရာယျကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အိပျရေးဝဝ အိပျသငျ့ပါတယျ။
အိပျရေးဝဝအိပျစကျခွငျးကွောငျ့ ကနျြးမာရေး၊ အလှအပဆိုငျရာ ကောငျးကြိုးတှသောမက ဘဝအောငျမွငျတိုးတကျအောငျလညျး ကောငျးစှာ အထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။ အိပျစကျခွငျးက ပေးစှမျးတဲ့ ဘဝအောငျမွငျမှု ကောငျးကြိုးတှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
၁။ လုပျနိုငျစှမျးနဲ့ မှတျဉာဏျစှမျးရညျတှေ မွငျ့တကျလာမယျ။
အိပျစကျနစေဉျမှာ ဦးနှောကျက တဈနတေ့ာလုံးရဲ့ မှတျဉာဏျတှကေို စိစဈပွီး သိမျးဆညျးပေးရပါတယျ။ အိပျရေးဝဝမအိပျစကျတဲ့အခါမှာ ဦးနှောကျကနေ မှတျဉာဏျတှကေို စနဈတကသြိမျးဆညျးမပေးနိုငျတာကွောငျ့ သတိမတေ့တျတာတှေ၊ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးလြော့နညျးတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
၂။ ပိုမို အာရုံစူးစိုကျနိုငျလာမယျ။
ညဘကျမှာ ကောငျးမှနျစှာ အိပျစကျခွငျးက အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှုစှမျးရညျကို ပိုမိုထကျမွကျလာစပွေီး သငျယူလလေ့ာမှုကို ပိုမိုလှယျကူအောငျ အထောကျအကူပွုပေးနိုငျပါတယျ။
၃။ ခန်ဓာကိုယျကို ပိုမိုကဈြလဈသှယျလစြတေယျ။
ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခခြငျြသူတှအေတှကျ နညျးလမျးကောငျးတဈခုက အိပျရေးဝဝအိပျစကျခွငျးပါပဲ။ အိပျရေးဝဝ အိပျစကျတဲ့အခါ အစာစားခငျြစိတျကို လညျပတျစတေဲ့ leptin ဟျောမုနျးကို ထုတျလှတျပေးပွီး အစာမြားမြားမစားခငျြအောငျ တားဆီးပေးတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးညှိပေးနိုငျပါတယျ။
၄။ ခန်ဓာကိုယျခုခံအားကို မွငျ့တကျစတေယျ။
အိပျစကျနခြေိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ခုခံအားစနဈကနေ ရောဂါပိုးမှားတှကေို သစေနေိုငျတဲ့ antibodies နဲ့ cytokines တှကေို ထုတျလှတျပေးတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရောဂါတှမေဖွဈအောငျ၊ မဖြားနာအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
၅။ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ပိုမိုကောငျးမှနျစှာ ခမြှတျနိုငျစတေယျ။
အိပျစကျနခြေိနျမှာ အာရုံကွောလေးတှကေို ခတ်ေတအနားပေးထားတယျ၊ ပကျြစီးနတေဲ့ အာရုံကွောဆဲလျတှကေို ပွနျလညျပွုပွငျပေးပွီး အာရုံကွောသတငျးပို့ခမြှုတှေ သှားရာလမျးတဈလြှောကျကို ရှငျးလငျးပေးထားသလို ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နအေ့ခြိနျတှမှော ဦးနှောကျကို ရှငျးလငျးစပွေီး ဆုံးဖွတျခကျြခမြှတျရာမှာ တှဝေမေနတေော့ဘဲ အကောငျးဆုံး ဆုံးဖွတျစနေိုငျပါတယျ။
၆။ စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြော့ကစြတေယျ။
အိပျရေးဝဝ အိပျစကျခွငျးဟာ စိတျကို တညျငွိမျစတေယျ၊ စိတျဓာတျကို တကျကွှလနျးဆနျးစပွေီး စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စိုးရိမျစိတျတှကေို လြော့ကစြပွေီး စိတျကရြောဂါမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။